threat - Synonyms of threat | Antonyms of threat | Definition of threat | Example of threat | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for threat
Top 30 analogous words or synonyms for threat
ဘားမား ဗီဂျေ under threat of death and imprisonment, to beam the truth ofacountry
အီမို Emo သည် post-hardcore ၏ ပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် washiton D.C မှ hardcore punk ဖြစ်ရပ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ အကြမ်းဖက်မှုများမြင့်တက်လာပြီး Minor Threat တီးဝိုင်းမှာ Ian Mackaye ကြောင့် နိုင်ငံရေးများကျယ်ပြန့်စေခဲ့သည်။ သူသည် ဂီတ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို အများနှင့် အတူမှ ပုဂ္ဂလိက အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ Minor Threat မှ Guy Picciotto သည် Rites of Spring ကို ၁၉၄၈တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ hardcore ၏ melodic guitar များမှ ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်များကို
Post-hardcore Steven Blush သတိပြုမိသည်မှာ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော စာသားများနှင့် တောင့်တင်းခိုင်မာသော post-punk သံစဉ်များကို တီးဝိုင်းက အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ချီကာဂိုဖြစ်ရပ်မှ The Effigies တီးဝိုင်းသည် ဂီတကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး hardcore အုပ်စု Minor Threat နှင့် ဗြိတိန် post-punk တီးဝိုင်းများဖြစ်သည့် Stranglers, Killing Joke နှင့် The Rats စသော တီးဝိုင်းများလွှမ်းမိုးထားသည်။
ပန့်ခ် ယဉ်ကျေးမှု No Wave ရုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှုဟာလည်း ပန့်ခ်ရသဗေဒ ခံယူချက်တွေအပေါ် အခြေခံခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီး ပန့်ခ်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေကတော့ Derek Jarman နဲ့ Don Letts တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပန့်ခ်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ အများကြီးထဲက 24 Hour Party People ကားမှာ ပန့်ခ်ရော့ခ်ကနေ New Wave နဲ့ Madchester ဂီတမျိုးကွဲတွေအဖြစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာပုံကို တင်ဆက်ထားပြီး၊ Threat ဇာတ်ကားမှာတော့ နယူးယောက်ခ် hardcore ဂီတမြင်ကွင်းက စစ်သွေးကြွ Straight Edge ပန့်ခ်တွေအကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ပြ ထားပါတယ်။
Alternative rock ဆယ်စုနှစ်အဆုံးတွင် alternative တီးဝိုင်းများသည် major label များသို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ R.E.M နှင့် Jane’s Addiction တို့သည် ရွှေနှင့် platinum မှတ်တမ်းများရရှိခဲ့သည်။ Pixels တီးဝိုင်းသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ထူးခြားစွာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်အလယ်တွင် Husker Du ၏ album Zen Arcade သည် hardcore များလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Rites of Spring ကို ပထမဆုံး emo တီးဝိုင်းဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ Minor Threat အဆိုတော် Ian Mackaye သည် Dischord Record ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အီမို ၁၉၈၀ တွင် DC hardcore တီးဝိုင်းများတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့အများစုမှာ hardcore punk တီးဝိုင်းနှင့် post-hardcore တီးဝိုင်းများဖြစ်သည်။ Post-hardcore သည် hardcore punk ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး post-punk ကဲ့သို့ melodic နှင့် experimental ဆန်သည်။ hardcore punk ၏ပုံစံများကို Minor Threat, The Faith, Black Flag နှင့် Husker Du တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ငုင်းတို့သည် emocore တီးဝိုင်းများမှလည်း လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း ကျူးဘားနိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာအရေးအခင်းဟုအမည်တွင်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွင် ကာရေဘီယံအရေးအခင်း(Caribbean crisis) (, tr. "Karibskiy krizis") ဟု အမည်တွင်သည့် ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်းသည် ၁၉၆၂၊ အောက်တိုဘာတွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကျူးဘားနိုင်ငံကတစ်ဖက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတစ်ဖက် ၁၃ရက်ကြာရန်စောင်ကြသော အရေးအခင်းဖြစ်သည်။ It is one of the major confrontations of the Cold War, and is generally regarded as the moment in which the Cold War came closest to turning intoanuclear conflict. It is also the first documented instance of the threat of mutual assured destruction (MAD) being discussed asadetermining factor inamajor international arms agreement.
၂၀၁၇ ဆီရာလီယွန် ရွှံ့ဖုံးလွှမ်းမှုများ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအနေဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးသည့် နေရာဒေသများမှ စွန့်ခွာကြရန် ဆီရာလီယွန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးရုံးမှ အကြံပြုခဲ့သည်။ Additional evacuations took place when aerial images ofahillside adjacent of Sugar Loaf revealedathreat of another mudslide which could impactamuch wider area. အစားအသောက်၊ ရေနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရီးဂျန့်နှင့် ကာနင်ဂိုရှိ အလုပ်သမားများက အရေးပေါ် အိမ်သာများနှင့် လီတာ ၁၀,၀၀၀ ရေရယူမှုစနစ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ စီးဆင်းမှုမရှိသည့် ရေကြောင့် ရေမှတဆင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားသည့် ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှုကြောင့် ရေလှောင်ကန်များ၊ ရေသန့်စင်ဆေးပြားများနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ကျန်းမာရေးပညာပေးများကို ယူနီဆက်ဖ် အဖွဲ့မှ ပြုလုပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။